Safaaradda Soomaalida ee Tansaaniya oo sheegtay inuu yaraaday Soomaalidii sida sharci daradaa oga sii dhex safri jirtay dalkaasi. – Radio Daljir
Safaaradda Soomaalida ee Tansaaniya oo sheegtay inuu yaraaday Soomaalidii sida sharci daradaa oga sii dhex safri jirtay dalkaasi.
Juunyo 15, 2013 4:04 b 0
Daarusalaam, Jun 15, 2013- La taliyaha dhanka siyaasadda ee safiirka Soomaalida ee Tansaaniya ahna ku xigeenka Safiirka Maxamed Diiriye Cilmi ayaa waraysi uu siiyay radio daljir waxaa uu ku sheegay inuu hoos u dhac ku yimid qulqulkii Soomaalida u safraysa dalka Koonfur Afrika ay ku mari jireen dalka Tansaaniya.
Lataliyaha ayaa tilmaamay in hoos u dhacaasi ay ku timid dhawr arimood oo ay ugu waaweyn yihiin Soomaalida oo ogaatay baaxadda dalka Tansaaniya oo weyn iyo dhibaatada Soomaalida loogu gaysanayo dalka ay inta badan u hanqal taagayaan ee Koonfur Afrika oo soo badanaya.
Cilmi, ayaa sheegay in hadda uusan jirin qof Soomaaliya oo dalka Tansaaniya ugu xiran sabab la xiriirta isagoo gacanta lagu dhigay isagoo si sharci darraa kaga baxaya dalkaasi, ayna taasi ku timid dadaal dheeriya oo ay samaysay safaaradda Soomaalida ee dalkaas oo dhawaan boorka laga jafay.
Ku xigeenka safiirka safaaradda Soomaalida ee Tansaaniya ayaa dhanka kale tilmaamay inay jiraan dhawr iyo toban qof oo arimo burcadbadeednimo ugu xiran dalkaasi kuwaasoo ay doonayaan in dawladda dalkaasi ay kala hadlaan si dalkooda hooyo loogu wareejiyo xabsigooda.
Masuulkan ka tirsan safaaradda Soomaalida Tansaaniya ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay inaysan haba yaraatee jirin tacadi ay la kulmaan Soomaalida ku nool dalkaasi.
M/weynihii DKMG ahayd ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed ayaa labo sano gudahood dhawr mar booqday dalkaasi isagoo masuuliyiinta safaaradda Soomaalidana kala hadlay sidii loo daryeeli lahaa Soomaalida ku nool dalkaasi.
Sheeko Gaaban: qaybtii 1’aad ee sheeko cusub (Dhegayso)
Radio Hirad, Baahin Jimce 14 June- -2013,